China PLA Utshani ifektri abakhiqizi | I-Radar
I-PLA Cling Wrap
Ukusetshenziswa Kwasekhaya Ukugoqwa Kwe-Cling
Ukusongelwa Kokusetshenziswa Kokuhweba
Ifilimu le-PLA High Transparency
Ifilimu le-PLA Stretch
Isivalo se-PLA Cup
Isongelwe Ngokugoqwa Okubolayo Okubolayo
I-100% Ebolayo futhi i-Compostable, i-eco-friendly yangempela, ayikho ingozi emvelweni, ingahle ichithwe ngokuphelele ibe yi-H2O ne-CO2 ezindaweni zezimboni zezimboni zingakapheli izinsuku eziyi-180.
I-PLA Straw Stable
Enza ngendlela oyifisayo Usayizi
Ukupakisha okwenziwe ngokwezifiso
Umbala owenziwe ngokwezifiso
I-FDA, EN13432, i-BPI
6 * 200mm utshani obuqondile
6 * 210mm utshani obuguquguqukayo
Isongwe ngo-6 * 200mm
Isongelwe u-6 * 210mm
Isongwe ngophrinta we-6 * 200mm otshani oqondile
Isongwe ngophrinta we-6 * 210mm utshani obuguquguqukayo
6 * 200mm straw oqondile Ngokuphrinta ngotshani
6 * 210mm utshani obuguquguqukayo Ngokuphrinta ngotshani
A: I-100% Ebolayo futhi i-Compostable, i-eco-friendly yangempela, ayikho ingozi emvelweni, ingonakaliswa ngokuphelele ku-H2O no-CO2 ezikhungweni zokwenziwa komquba zingakapheli izinsuku eziyi-180.
B: Ukusetshenziswa: Ukusetshenziswa Kwekhishi. Ukushisa kwemicrowave, ukulondolozwa kokudla kwesiqandisi, ukupakisha kokudla okuphekiwe kanye nezinye izikhathi kusetshenziswa kakhulu emkhakheni wasendlini, esitolo, ehhotela nasezimbonini zokupakisha ukudla.
C: Isevisi: Ngemikhiqizo eseqedile, sinikezela ngezinhlelo zesikhathi eside ezisabela kunoma iyiphi impendulo yekhasimende engaba nayo; ngezinto eziguquliwe, sinikeza insizakalo yezobuchwepheshe ngemuva kokuthengisa ukuqinisekisa impumelelo yokukhiqiza.
A, Ukuqinisekiswa kwekhwalithi：
Sinohlelo lwe-QA lochwepheshe lokuqinisekisa ikhwalithi yezimpahla zethu eziningi, kusuka kokungavuthiwe kuya emikhiqizweni eqediwe.
B, Ubuchwepheshe obuthuthukisiwe:
Qhubeka nokuthuthukisa ubuchwepheshe ngesikhathi sokwenza, singakhiqiza amafilimu e-PLA asezingeni eliphakeme;
C, Ithimba lochwepheshe:
Sisebenza ngokukhethekile kwimikhiqizo ehlobene ne-PLA iminyaka engaphezu kwengu-10, ukuguqula okokusebenza okuluhlaza, ukukhiqizwa kwemikhiqizo ye-PLA eseqedile, ukugcina imikhiqizo yethu ikhwalithi esezingeni eliphakeme nomsebenzi we-function. Isixazululo kuwo wonke amakhasimende ezimbonini ezahlukene.
Sinezitifiketi ezihlobene zemikhiqizo yethu, ukufakazela ukuphepha kwemikhiqizo yethu kanye nokubonisa ubuqotho bethu, njenge-FDA, EN13432, ASTM D6400, BPI, njll.
Kusho ukuthini ngo-100% Compostable?
Ukufakwa komquba okungu-100% kusho ukuthi imikhiqizo ye-PLA ivuselelwa ngokuphelele. Ingaguqulwa ibuyele ku-monomer kanye ne-polymer, noma, ingahlukaniswa ibe yibhayodeji ibe ngamanzi, isikhutha ne-organic materials. I-PLA isimeme kakhulu kune-petroleum ejwayelekile eyenziwe ngepulasitiki.
Kuthatha isikhathi esingakanani ukukhiqiza ngokuphelele umquba we-PLA?
Imvamisa, i-PLA izokwenza umquba ngokuphelele ezentengiselweni cishe ezinsukwini ezingama-30-45. Emigqonyeni yokwenza umquba ekhaya kungathatha isikhathi eside.
Ngabe umquba we-PLA emgqonyeni wami kadoti?
Imikhiqizo ye-PLA idinga inani elithile lokushisa, umswakama nomoya kumquba. Izindawo zokulahla udoti ezijwayele ukudabukisa azinazo lezi zimo ezidingekayo futhi izinto ezilahlwa kudoti imvamisa zigcina kulezi zindawo zokulahla udoti. Futhi, ukugcwaliswa komhlaba ngokuvamile kuvalwa okusho ukuthi ukubola kwenzeka ngaphansi kwendawo futhi lokho okuphonswa kudoti kungagcinwa amashumi eminyaka emva kwalokho.
Yiziphi izidingo zokugcina ze-PLA?
I-PLA kufanele igcinwe ngaphandle kwelanga eliqondile futhi endaweni epholile, eyomile. Gcina imikhiqizo ye-PLA ingaphansi kwamazinga okushisa ayi-110 degrees (F) nangaphansi komswakama ongu-90% ngaso sonke isikhathi.
Kufanele ngiyiphathe kanjani imikhiqizo ye-PLA ngesikhathi sokuhamba?
Gcina imikhiqizo ye-PLA ezindaweni ezipholile nezomile lapho izinga lokushisa lingadluli ku-110 degrees (F). Yize kungadingeki, iloli eliqandisini liyanconywa kakhulu ekuthutheni imikhiqizo ye-PLA.
Ngingayisebenzisa imikhiqizo ye-PLA ngophuzo olushisayo?
Yebo, uma izinga lokushisa lesiphuzo lingeqi ku-110 degrees (F). Imikhiqizo ye-PLA isebenza kangcono uma isetshenziswa neziphuzo ezibandayo yize ukubekezelelana okujwayelekile kokushisa kwemikhiqizo ye-PLA kungu-110 degrees (F). Sinesivalo senkomishi yekhofi engamelana nokushisa ukufanisa inkomishi yephepha engasetshenziswa kuziphuzo ezishisayo.
Ziyini izindleko ezijwayelekile ze-PLA uma kuqhathaniswa nemikhiqizo ejwayelekile yepulasitiki?
Izindleko ezijwayelekile zincike kumkhiqizo, uhlobo, nosayizi we-oda. Kodwa-ke izindleko uma ziqhathaniswa nemikhiqizo ejwayelekile epulasitiki ziya ngokuncintisana kakhulu njengoba intshisekelo kumkhiqizo okhiqizwayo okhulayo ibila. Ukungafani kwamanani cishe kungu-15 +%.
Ingabe imikhiqizo ye-PLA iphephile ukudliwa?
Imikhiqizo ye-PLA ayidleki kepha ngokuvamile ayinabuthi. Izingcezu ezincane ze-PLA cishe zizodlula ngokungenabungozi ngomgudu wamathumbu. Uma usudlulile emgudwini wamathumbu uzosuswa esihlalweni. Sicela ubonane nodokotela uma kuvela ubuhlungu noma ukungakhululeki.
Angizwani nommbila; Ngingabe ngisasebenzisa imikhiqizo ye-PLA?
Yebo, ukushisa okusetshenziswe enqubweni yokuthola isitashi emmbileni kubulala i-profiilin esebenza ngamandla omzimba. I-Profilin yikhemikhali elivame ukudala ukusabela okweqile futhi alitholakali kwimikhiqizo ye-PLA.
Olandelayo: Isongelwe Ngokugoqwa Okubolayo Okubolayo
Okubolwayo okubolayo okubolayo okubolayo
Okubolayo okubolayo ngeplastiki Utshani
Utshani Bepulasitiki Obubolayo
Ikheli:Ukwakha 4, Santang Industrial Park, No. 338, Jiuhua North Road, Wuhu, Anhui,
Izikhwama Ezinokwakhiwa, Ukugoqwa Kwe-Eco Cling Wrap Ushukela, Ifilimu Elolayo Lokubolayo, Izikhwama Zodoti Ezilahlwayo Ezilahlayo, Izikhwama zemfucumfucu ezingabizi, Ukusonga Okugoqekayo Okubolayo,